Koobka Champions League-ga: Guusha Real Madrid iyo niyad jabka Liverpool | Onkod Radio
Koobka Champions League-ga: Guusha Real Madrid iyo niyad jabka Liverpool
Real Madrid ayaa markii 14-aad ku guuleystay Koobka Champions League-ga
Muqdisho (Onkod Radio) — Kooxda Liverpool oo doonaysay in ay markeedii 7-ay ku guulaysato koobka Champions Leaque-ga ayaa waxaa lasoo deristay niyad jab weyn kaddib markii qeybtii dambe ee ciyaarta uu gool ka dhaliyay ciyaaryahanka Vinicius Jr, sidaasna ay guusha ku raacday kooxda Real Madrid, oo ku guuleysatay koobka horyaalka Yurub.
Real Madrid waxaa goolkii guusha u dhaliyay Vinicius Jr
Taariikhda labadan koox
Real Madrid ayaa laga badiyay afar jeer 12 kulan oo Champions League ah xilli ciyaareedkan – Liverpool ayaa laga badiyay seddex ka mid ah 62 kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan 2021-22 – sidaas oo ay tahay kooxda heysata horyaalka Spain ayaa gaadhay finalkii 17-aad ee tartanka.
Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkan guulo soo hoyisay iyadoo kasoo adkaatay kooxaha Paris St- Germain, Chelsea, Manchester City, xaleyna waxay ciyaartii kama dambeysta aheyd garaacday Liverpool , sidaas ayay horyaalkii ku qaaday.
Real ayaa sida oo kale soo laabasho cajiib ah samaysay ciyaartii ay ka soo baxayeen City.
Iyada oo cel-celis ahaan 5-3 ku raacday kooxda Pep Guardiola oo hal daqiiqo oo kaliya ka harsan tahay waqtigii caadiga ahaa ee lugtii labaad, Benzema ayaa dhaliyay ka hor inta uusan Rodrygo ku qasbin waqtiga dheeriga ah 89 ilbiriqsi ka dib.
Benzema, ayaa todoba gool ka dhaliyay Champions League xilli ciyaareedkan kooxaha Ingiriiska, ayaa rigoodhe ay haleen kooxdiisa ugu soo saaray in ay soo gaadhaan ciyaartan.